I-China Cervical Neck Traction yedivaysi ye-B01-1 Super Soft Production kanye neFektha | I-Hongzhu
Okokusebenza Indwangu ethambile yokuthambisa umhlambi, i-PVC esezingeni eliphakeme, insimbi engenasici, I-highx late tube
Umbala Izithombe ezi-4 zemibala zikhombisa noma zenziwe ngokwezifiso
Iwaranti yezinsuku ezingama-365: sidlula ukulawulwa kwekhwalithi eqinile ukwenza lo mkhiqizo uvunyelwe yi-FDA kanye nohla lwemikhiqizo enempilo. Uma kunezinkinga zekhwalithi noma zokuqina, sinikeza iwaranti yezinsuku ezingama-365.
Idivaysi enwebekayo yomsamo wezinto ezinentamo emine, enezinto ezisezingeni eliphakeme zomhlaba, inikela ngokwelashwa komzimba wesibeletho sakho Inezimbobo ezimbili ze-hoop-loop engxenyeni engaphambili, evumela ukuthi ivumelane nokucindezela okuphezulu okudingayo. Kulula futhi ukuthwala lapho kudalulwe uhambo lokuhamba lomndeni noma lwebhizinisi.
Esedlule: I-Cervical Neck Traction yedivayisi B01
Olandelayo: Hemiplegic Walker Yabantu Abadala